Muxuu u baahan yahay inuu sameeyo Cristiano Ronaldo si uu markiisii Shanaad u xaqiijiyo ku guuleysiga Kabta Dahabka ah ee Yurub? – Gool FM
Haaruun July 23, 2020
(Turin) 23 Luulyo 2020. Cristiano Ronaldo ayaa wajahaya tartan cusub labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyey horyaalka Serie A weliba si xiriir ah.
Haddii uu dhaliyo shan gool afarta kulan ee ugu dambeysa Juventus horyaalka Serie A kaddib waxaa la siin doonaa abaal-marintiisii shanaad Kabta Dahabka ee Yurub.
Robert Lewandowski ayaa haatan kaga sarreeya liiska gooldhalinta ugu fiican Yurub isagoo dhaliyay 34 gool, halka Ronaldo uu dhaliyay 30 gool.
Haddii uu xiddiga reer Portugal dhaliyo afar gool oo dhanka goolasha kala mid noqdo Weeraryahanka Kooxda Bayern Munich, markaas abaal-marinta ma wadaagi doonaan labada ciyaaryahan.
Xilli ciyaareedkann, European Sports Media (ESM) oo MARCA ay wakiil kaga tahay Isbaanishka, waxa ay soo saareen sheeko cusub oo ku saabsan qawaaniinta iyo waxa laga yeeli doono haddii labada ciyaaryahan ay isku goolal noqdaan.
Haddii labada ciyaaryahan ay dhaliyaan goolal isku mid ah oo ay helaan dhibco isku mid ah ku guuleystaha abaal-marinta waxa uu noqon doonaa ciyaaryahanka goolashaas ku dhaliyey daqiiqadaha ugu yar.
Xiddiga xulka qaranka Poland ayaa 34 gool ku dhaliyey 2,761 daqiiqo, halka Ronaldo uu 30 gool ku dhaliyey 2,649 daqiiqo illaa iyo hadda, taasoo la micno ah haddi uu afar gool dhaliyey inay ku filnaan doonto inuu kabta dahabka ah ee Yurub ku guuleysto laacibka reer Portugal.
Dhinaca kale, Ciro Immobile ayaa isaguna sidoo kale dhaliyey 30 gool, laakiin waxa ay ku qaadatay 2,816 daqiiqo, waxaana uu sidoo kale u baahnaan doonaa isaguna inuu dhaliyo shan gool si uu kaga sare maro Lewandowski oo uu abaal-marinta ugu guuleysto.
Kooxda Juventus ayaa afarteeda kulan ee ugu dambeeya horyaalka waxa ay wajahaysaa Udinese, Sampdoria, Cagliari iyo Roma, halka Kooxda Lazio ay afarteeda kulan ee ugu dambeeya la ciyaari doonto Cagliari, Hellas Verona, Brescia iyo Napoli.
Tan iyo markii dib loo bilaabay ciyaarista horyaalka Serie A oo laga soo laabtay Coronavirus, Ronaldo ayaa loo diiwaan geliyey sagaal gool siddeed kulan oo uu ciyaaray horyaalka.
Weeraryahankii hore ee kooxda Real Madrid ayaa ku guuleysan kara Kabta dahabka ah ee Yurub markiisii shanaad kaddib markii uu hore ugu soo guuleystay xilli ciyaareedyadii 2007/08, 2010/11, 2013/14 iyo 2014/15.